Ozizi nke Tierno Bokar - Afrikhepri Fondation
Ozizi nke Tierno Bokar
Na-agụ: 11 mins
Lụwa a na-ahụ anya bụ naanị nnukwu akụ ilu, akwụkwọ onyogho iji ghọta. Mana ị ga-ama ka esi atụgharị. Tierno chọrọ ka ndị na-eso ụzọ ya nwee obi na-emeghe, ezi uche, mkpụrụ obi na-enwu ọkụ. Anyị ga-aghaghara ịchọ ihe ime mmụọ, naanị nke ga-adịgide adịgide:
“Uche mmadụ jidesiri ịma mma ike, ma ọ na-anọgide na-adị n'elu ihe, ebe ọ na-enweghị nkwekọrịta na-adịgide adịgide. Anwansi nke igwe ojii dị iche iche nke na-eme ka ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ daa kpamkpam na obere oge, mma nke anụ ahụ na-adalata na mgbede nke agadi ...
“Gị, onye na-eso ụzọ nke rutere n'ọnụ ụzọ nke zaouia ebe anyị chọrọ ịhụ ire ọkụ dị nsọ nke ezigbo ndụmọdụ na-enwu, mara na ịma mma nke ihe onwunwe na-agba ọsọ ngwa ngwa, ọ nwere ike ịbụ naanị ihe na-apụ n'anya na-apụ n'anya. Gbanwee mbọ gị site na nchụso ya mana tinye ha na mmeri nke ezi, ịma mma na-adịgide adịgide, ịma mma omume nke na-eto n'ọhịa nke Mmụọ Nsọ. "
Chọọ ọzọ n'ihi na onye na-achọ achọpụta
"Chọọ site n'ọchịchịrị nke ndụ ihe na kpakpando na-enwu gbaa (Quran: Sura 83, amaokwu nke 3) ga - eduga gị n'ogige nke ezigbo mma na ebighi ebi."
Ọdịnaya nke nkuzi Tierno Bokar dị na izi ozi ya dị mfe nghọta.
Ọ bụ nke mbụ, n’ezie, ịhụ Chineke n’anya na ịdị n’otu nke Chineke. Nke a bụ ihe ndabere, alpha na omega nke mkpughe: Dee aha nsọ n'ihu akwa gị ka ọ bụrụ n'ụtụtụ, mgbe ị tetara, ihe mbụ ị hụrụ n'anya gị.
“You bilie, jiri ịnụ ọkụ n’obi kwuo ya dị ka okwu mbụ si n’ọnụ gị pụta ma tie gị ntị. Na mgbede mgbe ị na-ehi ụra, otu oge dina ala, lelee ya anya dị ka ihe ikpeazụ a hụrụ tupu ụra. Na ogologo oge, ìhè nke dị na nzuzo nke akwụkwọ ozi anọ ahụ (Celsius) ga-agbasakwa na gị na ihe nwuru ọkụ nke isi Chukwu ga-agbanye mkpụrụ obi gị. Na-ekwughachi aha Allah ma ọ bụ usoro na-agba akaebe na ịdị iche nke Chineke bụ ụzọ doro anya iji webata onwe ya ume nke ga-eme ka anyị nwee okpomọkụ dị omimi.
(°) Edere Allah na asusu Arab na alif, lam abuo na ha.
"Enwere ogo na ihe ọmụma okpukpe, nke ndị kwere ekwe nkịtị," hudled in a little corner of ọdịnala, "na nke ndị ahụ kpebisiri ike n'okporo ụzọ ahụ na-eduga n'eziokwu ahụ, ebe mmadụ na a na-eme ka ihe ndị ọzọ dị ndụ dị n’udo.
Ma nke atọ, ònye ga-akọwa ya? "
"Ìhè na-enweghị ntụ, oké ọchichiri, ọ bụ, n'ikpeazụ, ebe obibi nke Eziokwu niile: Ndị nwere ọ happinessụ nke iru ogo a na-efunahụ ha wee bụrụ ihe na-aghọ otu mmiri mmiri na-ada na Niger ma ọ bụ kama na oké osimiri na-enweghị nsọtụ oke na omimi ... Ma nsọkọ Chineke adịghị, nke megidere nke ahụ, na-enye omume nke omume, nke enwere ike ichikota n'okwu ole na ole: ịhụnanya, afọ ọma, ọmịiko, ndidi. "
Ọkụ nke si na akwu daa
Otu ụbọchị na 1933, n’oge a na-amụ banyere nkà mmụta okpukpe, nwa ọkụkọ iloro si n’otu akwụ́ dị n’elu ụlọ daa. N'ịbụ onye enweghị mmasị n'ozuzu ya, Tierno Bokar kwụsịrị okwu ya ma kwuo, sị: “Nye m nwa nwoke nke nke a. "
Ọ na-enyocha obere nnụnụ ahụ ọ kpọrọ ka ọ bụrụ mmadụ "nwa nke ọzọ", ghotara na ndụ ya adịghị egwu ma tie mkpu: "Ekele dịrị Chineke onye amara ya kachasị mma metụtara mmadụ niile. Mgbe o leliri elu, ọ hụrụ na akwụ́ ya kewara ekewa nakwa na ụmụ ndị ọzọ ka nọ n'ihe egwu ịda.
Ozugbo, ọ rịọrọ maka eri, ọ rịgoro na steepụ na-adịghị mma ma jiri agịga gbazie ụlọ ya mebiri emebi, tupu ya edochi nnụnụ ahụ. Ekem, utu ke ndifiak ntọn̄ọ ukpepn̄kpọ esie, enye ama ọdọhọ ete: “Ọ dị mkpa ka m gwa gị banyere ọrụ ebere, n'ihi na ọ dị m nwute ịhụ na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime unu nwere ezi ịdị mma nke obi a.
Ma nke a bụ amara!
O buru na inwere obi ebere, ogaraghi gi aka ino na-ege ihe mmuta mgbe obere mmadu, nke nwere nsogbu n 'uzo nile, tiri mkpu maka enyemaka gi ma rio gi obi ebere: obi adighi gi nma na obi ike gi obi anughi oku a.
"Ọ dị mma, ndị enyi m, n'eziokwu, onye ga-ebu n'uche ịmụ akụkọ niile nke okpukperechi niile, ọ bụrụ na enweghị ọrụ ebere n'ime obi ya, ihe ọmụma ya ga-abụ ihe ọzọ karịa ibu na-abaghị uru."
Onweghi onye ga enwe obi uto site na nzuko Chineke ma o buru na onweghi obi ebere na obi ya. Na-enweghị ya, ekpere ndị so na canon bụ naanị mmegharị ahụ nke enweghị uru okpukpe; na-enweghị ya njem uka kama ịbụ njem dị nsọ na-aghọ ezumike na-enweghị uru. Ọ bụrụ na m ga-egosipụta okpukpe, aga m atụnyere ya na diski nkata, otu akụkụ nke ya bụ ịhụnanya na ọrụ ebere ọzọ. "
Ihe omume a dị ịrịba ama dị ka ọmịiko n'ebe ụmụ anụmanụ nọ na-enwe obere ebe n'okpukpe dị iche iche, ọ bụ ezie na ndị ọzọ nwere obi ụtọ.
Ime ihe ike: nke abụọ kacha mma
Maka Tierno Bokar ihe ike bụ ihe kachasị mma na nke na-abaghị uru:
"Ọ bụrụ na mmadụ ji ogwe aka gbuo mmadụ nke ihe Ọjọọ na-eme, onye nke a na-esi na ozu ahụ pụọ nke na ọ gaghị enwe ike ibi ọzọ ma banye n'oghere imi ya gbuo onye gburu ọchụ iji nwetaghachi mgbọrọgwụ ma megharịa ike ya. Ọ bụ naanị mgbe ishụnanya gburu ihe ọjọọ ka ọ na-adị ruo mgbe ebighị ebi ... "
Mgbe a jụrụ ya gbasara agha dị nsọ, ọ na-ekweta, sị: "Onwe m ka m masịrị nanị otu agha, nke na-achọ ịmeri emejọ anyị n'ime anyị."
“N'ime ha, mpako bụ otu n'ime ihe ndị kachasị emerụ ahụ:
“Planetwa anyi a bu nke pere mpe ma o bu nke pere mpe n’ime ihe nile nke onye nwe anyi kere created.
“Ihe kachasị mma nke e kere eke ga-adị n'etiti ndị na-ebili n'ịhụnanya, afọ ọma na nkwanye ugwu maka ndị agbata obi ha. Ndị a ga na-enwu gbaa dịka anyanwụ na-arigoro n’igwe.
“Obi umeala dị mkpa na-eduga n’inwe mmetụta nke ụmụ mmadụ dị n’otu na nke a ga-ejide n’aka n’ezie na ụzọ dị iche iche pụrụ iduba n’otu Eziokwu. Nnukwu ihe mmụta siri ike nke ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ajụ mana nke Tierno Bokar ga-ekwusi ike. "
“Nwanne n’ime Chukwu, bia n’ọnụ ụzọ nke zaouïa anyị, ọnụ ụlọ nke Lovehụnanya na Obi ebere, arụnala onye na-eso ụzọ Moses ma ọ bụ nke Jizọs, n’ihi na Chineke agbaala akaebe gbasara amụma ha.
- Na ndị ọzọ?
- Ka ha bata ma ọbụnadị kelee ha n'otu n'otu ka ị sọpụrụ ha ihe ha ketara n'aka Adam… n'ime nwa Adam ọ bụla, enwere akụkụ nke Mmụọ Chineke. Olee otu anyị ga-esi nwee ike ilelị arịa nwere ụdị ọdịnaya a? ”
“Egwurugwu mere ka ịma mma ya nwee ụda dị iche iche. N'otu aka ahụ, anyị na-ele anya n'olu ndị kwere ekwe dị iche iche ndị na-esite n'akụkụ niile nke ụwa, dị ka ukwe e ji eto Chineke nke a na-agwa Chineke onye naanị ya bụ naanị ya.
Otu nwoke, agbanyeghị agbụrụ ya, ozugbo ofufe na-enye mkpụrụ obi ya ìhè, ọ na-ewere oke nghọta nke diamond dị omimi. Agba ya ma ọ bụ ọmụmụ ya abaghị n'ime egwuregwu. "
Anyi puru ihu ozi banyere uwa niile, nke di nfe na nke ndi amuma nke Israel, nke ozioma, nke Ramakrisna ma obu nke Vivekananda na nkwenye ha di nkpa na Mo ahu buru ebe o choro na ya Enwere “ọtụtụ ebe obibi n’ụlọ nna m. "
Tierno Bokar apụọla n'azụ ụrọ ụrọ, na-amụmụ ọnụ ọchị n'ụlọ akwọ loro ma laghachi n'ọrụ ya dị ka onye na-akpa ihe.
“Onye ọbụla nke sitere n’isi ya mụta ozizi nile nke okwukwe nile, ọ bụrụ na o nweghị afọ ojuju n’obi ya, ọ ga-enwe ike were ihe ọmụma ya dịka ihe na-abaghị uru. Onweghi onye ga enwe obi uto nke Chineke ma oburu na inwegh obi ebere na obi ya. Na-enweghị ya ekpere ise ndị na-adịghị mkpa posturing. Na-enweghị ya njem uka bụ ije na-enweghị uru. "
"Chineke bụ ihe ihere nke ọgụgụ isi n'ihi na ihe ọ bụla ị tụụrụ ime n'echiche gị wee bụrụ ihe dị n'okwu gị dị ka Chukwu, ọ kwụsịghị ịbụ onwe ya Chineke, bụrụ ihe ọzọ karịa ụzọ nke ị tụrụ ime ya. Ọ na-agbanahụ nkọwa niile. ”
“Okwukwe na ekweghi ekwe di ka ala abuo nwere njikọ. Ekpere na-egosi oke ha. A na-akpọ onye na-ekpe ekpere ka onye kwesịrị ntụkwasị obi, n’agbanyeghi oke njo ya. Onye na-adịghị ekpe ekpere adịghị ntụkwasị obi, n'agbanyeghị na ndụ ya nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya. "
"Onye ọ bụla dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ bụ onye na-elekọta mkpụrụ nke ìhè."
"E nwere eziokwu ato: Eziokwu gị, eziokwu m na eziokwu ahụ."
“Mgbe a mụrụ nwatakịrị n’ebe a, m na-ahụ nne na nna ya ka mmanya na-a drunkụbiga mmanya ókè, na-ekele onwe ha ma jiri oke mkpu ọ announceụ maa ọkwa mmemme ahụ. Dịka otu n’ime ha ga-apụ, m na-ahụ ndị nne na nna na-eru uju ka ha yi ihe ịrịba ama nile nke iru-uju na ihe mgbu n’elu iru na uwe ha.
Ekwekọrita nke ụmụ mmadụ si otú a pụta ìhè nye ndị na-atụgharị uche. Agbụrụ mmadụ anyị na-achọ ndụ ma na-ezere ọnwụ. Ugbu a, gịnị ka a ga-amụ? Ọ bụ ịbanye n'ogige nke mmadụ ga-esi n'ọnụ ụzọ ọnwụ pụọ, naanị ụzọ ọpụpụ, nke dịịrị ndị ezi omume na ndị ajọ omume, ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe.
Kedu ihe ịnwụ? A na-amụghachi ya ruo ndụ ebighị ebi. Nwoke nwuru anwu laghachi n’ogige nke paradais ebe Chineke na-achi, ebe nweta ndu ebighi ebi. Ọ bụ ugbu a ka anyị kwesịrị ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ. ”
Ihe atụ nke nnụnụ na-acha ọcha na nnụnụ nnụnụ
“Ọ bụghị naanị na Tierno Bokar ezere ikpe ndị ọzọ ikpe, kamakwa ọ gbalịrị ime ka anyị ghọta na echiche dị mma na-adịkarị mma karịa nke ọjọọ, ọbụlagodi ma a bịa na ndị anyị na-ewere dị ka ndị iro anyị. Ọ dịghị adị mfe mgbe niile ime ka anyị kwenye, dị ka akụkọ akụkọ na-esonụ na-egosi ebe a duuru ya ịgwa anyị banyere nnụnụ ọcha na nnụnụ ojii.
"N'ụbọchị ahụ Tierno kwuru banyere amaokwu a:" Onye dị arọ nke atọm nke ọma ga-ahụ ya; onye mere ka arọ nke atọ nke ihe ọjọ ga-ahụ ya ”(Koran XC, 7 na 8).
Ka anyị na-ajụ ya ajụjụ banyere ezi omume, ọ na-agwa anyị, sị:
- Omume oma kachasi nma bu nke gunyere n’ekpere maka ndi iro ya.
- Kedu? 'Ma ọ bụ' Gịnị! M na-eche. Ndị mmadụ na-agwakarị ndị iro ha ọnụ kama ịgọzi ha. Ọ́ gaghị eme ka anyị yie onye nzuzu n’ekpere maka ndị iro anyị?
'Ikekwe,' Tierno zara, 'kama ọ bụ naanị n'anya ndị na-aghọtaghị. Menmụ nwoke nwere ikike ịkọcha ndị iro ha, mana ha na-emerụ onwe ha ahụ karịa ịkọcha ha karịa ịgọzi ha.
- Aghọtaghị m, ekwuru m. Ọ bụrụ na mmadụ bụrụ onye iro ya ọnụ ma ọ bụrụ na ọbụbụ ọnụ ya na-aga nke ọma, ọ nwere ike ibibi onye iro ya. Nke ahụ ó kwesịghị ime ka ahụ ruo ya ala kama?
“N’elu ala, ikekwe,” Tierno zara, “ma mgbe ahụ ọ bụ naanị afọ ojuju nke mkpụrụ obi ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ya mere afọ ojuju nke ọkwa dị ala, nke ihe onwunwe.
Site n’anwansi, mmadụ ịgọzi onye iro ya bụ uru kasịnụ. Ọbụlagodi na mmadụ gafere maka amaghị ihe ọ bụla n'anya ndị amaghị ihe, otu a na-egosi site na nke a, n'eziokwu, ntozu oke ime mmụọ ya na ogo nke amamihe ya. "
- N'ihi gịnị? Ajụrụ m ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka Tierno, iji nyere m aka ịghọta, kwuru banyere nnụnụ ọcha na nnụnụ ojii.
- ,mụ nwoke, ka o kwuru, dị na ibe ha, dịka mgbidi na-eche ibe ha ihu.
A na-adanye mgbidi ọ bụla na obere oghere ndị nwere nnụnụ ọcha na nnụnụ ojii. Nwa nnunu bu echiche ojoo na okwu ojoo.
Nnụnụ na-acha ọcha bụ ezigbo echiche na okwu ọma. Nnụnụ na-acha ọcha, n'ihi ọdịdị ha, nwere ike ịdaba na oghere nnụnụ ọcha na otu ihe ahụ bụ eziokwu banyere nnụnụ ojii nke nwere ike ịgba akwụ na oghere nnụnụ ojii.
Youssouf na Ali
Ugbu a, weregodị ụmụ nwoke abụọ kwenyere na ha bụ ndị iro. Ka anyị kpọọ ha Youssouf na Ali.
Otu ụbọchị, Youssouf, kwenyesiri ike na Ali chọrọ ka ọ merụọ ya, iwe were ya iwe ma chee ya echiche ọjọọ.
N'ime nke a, ọ na-ewepụta nnụnụ ojii ma, n'otu oge ahụ, wepụta oghere kwekọrọ. Nnụnụ ojii ya na-efega Ali na-achọ oghere na-enweghị ihe ọ ga-akwụ akwụ́ na ya dabara na ọdịdị ya.
Ọ bụrụ na nke ya, Ali ezigaghị nnụnụ ojii n'ebe Youssouf nọ, ya bụ na ọ ga-eziga ma ọ bụrụ na o zipughi echiche ọjọọ ọ bụla, ọ nweghị oghere ojii ya ọ bụla ga-atọgbọ chakoo.
N’achọghị ebe ọ ga-anọ, a ga-amanye nnụnụ ojii Youssouf ịlaghachi n’ụlọ akwụ ya, na-eweghachite ajọ ihe ọ kpatara, ihe ọjọọ nke ga-emecha taa ma bibie Youssouf n’onwe ya.
Ma cheedị na Ali zigakwara echiche ọjọọ. N'ime nke a, ọ tọhapụrụ oghere ebe nnụnụ ojii Youssouf nwere ike ịbanye iji debe ụfọdụ akụkụ nke ihe ọjọọ ya ma mezuo ebumnuche ya nke mbibi.
N'oge a, nnụnụ ojii nke Ali ga-efega Youssouf ma bịa nọrọ n'oghere nnụnụ ojii ahụ tọhapụrụ. Ya mere nnụnnụ ojii abụọ ahụ ga-enwetazu ebumnuche ha ma rụọ ọrụ iji bibie nwoke ahụ e zubere maka ha.
Ma ozigbo ọrụ ha gwụchara, onye ọ bụla n’ime ha ga-alaghachi n’ụlọ akwụ́ ya n’ihi na, a na-ekwu, sị: "Ihe niile laghachiri na isi mmalite ya"
“Ihe ọjọ nke ha jiri mee ka ike gwụ ha, ajọ ihe a ga-echigharịkwuru ndị dere ya wee mechaa mbibi ha.
Onye edemede nke echiche ọjọọ, ọchịchọ ọjọọ, ọbụbụ ọnụ wee rute n'otu oge ahụ site na nnụnụ ojii nke onye iro ya na nke nnụnụ ojii nke ya mgbe nke a laghachikwutere ya.
Otu ihe ahụ na-eme na nnụnụ ọcha. Ọ bụrụ na anyị ezigara onye iro anyị naanị ezi echiche mgbe ọ na-ezigara anyị echiche ọjọọ, nnụnụ ya ojii agaghị achọta ebe anyị na ha ga-anọ wee laghachi na onye zitere ha.
Banyere nnụnụ ọcha ahụ bu ezi echiche anyị ga-ezigara ya, ọ bụrụ na ha ahụghị ebe ọ bụla nwere onye iro anyị, ha ga-alaghachikwute anyị ebubo na ume niile bara uru nke ha bu.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị ezipụ naanị echiche dị mma, ọ nweghị ihe ọjọọ, ọbụbụ ọnụ ọbụla ga-erute anyị na anyị.
Ọ bụ ya mere mmadụ ga-eji na-agọzi ma ndị enyi ya ma ndị iro ya. Ọ bụghị naanị na ngọzi ahụ na-aga ebum n'uche ya iji mezuo ebumnuche ya, kama ọ na-alaghachikwutekwa anyị, otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ọzọ, jiri ezi ihe niile ọ bụ maka ya. "
Nke a bụ ihe ndị Sufis kpọrọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Ọ bụ ezi ịhụnanya onwe onye, ​​nke jikọtara ịkwanyere onwe gị na onye agbata obi gị ùgwù n'ihi na mmadụ ọ bụla, nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ, bụ nkwụnye ego nke akụkụ nke Ìhè Chineke. Nke a bụ ihe kpatara na ndị Sufis, dị ka nkuzi nke onye amụma ahụ, achọghị ịchọ imerụ ọnụ ha ma ọ bụ ịbụ ha site n'okwu ọjọọ ma ọ bụ echiche ọjọọ, ọbụlagodi nkatọ na-adịghị mma.
Ndụ na nkuzi nke Tierno Bokar, nke Amadou Hampaté Bâ na-ekwu
Ndụ na nkuzi nke Tierno Bokar. Sage nke Ba
7 ọhụrụ site na .7,80 XNUMX
8 ejiri site na € 5,00
Zụta € 7,80
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 7, 2021 3:12
Ne Makandal, nnukwu onye na-eme ka ọ dị n'otu na onye ọgụ maka nnwere onwe na usoro Bantu
Afrịka na - eme ngagharị iwe ya?
Akwụkwọ Inọk, ederede ochie nke na-ekpughe okike nke ụwa
Kedu esi kwadebe pastels?
Ihe Archeology Akwụsịbidoro - Site Atlantis ruo Sphinx (PDF)